Farmaajo oo shir la leh wakiilada Beesha Caalamka | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu Teendhada Afisyooni shir kula leeyahay xubnaha wakiilada Beesha Caalamka ee C6+ loo yaqaan, shirkan ayaa imaanaya kaddib markii todobaadki hore Golaha Shacabka BJFS ay muddo kordhin labo sano u sameeyeen Madaxweyne Farmaajo iyo hay'adaha dowladda.
Dalal dhowr ah oo ka mid Beesha Caalamka kuwaasoo ay ugu horreeyaan Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Midowga Yurub, Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ayaa ka hor-yimid muddo kordhinta uu sameeyay Mursal, iyagoo ku tilmaamay mid wiiqeysa xasiloonida, midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in dib loogu soo laabto wadahadalladii ka furnaa teendhada Afisiyooni.
Shirkan ayaa la filayaa in lagu lafa-guro xaaladda doorashada iyo muddo kordhinta, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku adkeysaneyso in ay umadax bannaantahay arrimaha doorashooyinka dalka, in faraha looga qaadana soo jeedisay. Madaxweyne Farmaajo ayaa aqbalay shirkan oo ay Beesha Caalamku dalbatay waxa uuna ka dhacayaa xeyndaabka Xerada Xalane oo ay maamulaan ciidamada Nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM, sidoo kalena ay xarumo u yihiin dhammaan xubnaha wakiilada Beesha Caalamka.
Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay gudaha xeyndaabka Xalane waxa uu si gaar ah ula kulmi doonaa wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Mareykanka halkaasoo uu kula shiri doono, islamarkaana lagu wareejin doono farriin kaga timid xoghayaha difaaca dowladda mareykanka.